कसरी आयो रानीमहलमा होटल बनाउने प्रस्ताव? :: Setopati
कसरी आयो रानीमहलमा होटल बनाउने प्रस्ताव?
रवीन्द्र शाही काठमाडौं, फागुन १०
एक शताब्दी पुरानो रानीमहलमा हेरिटेज होटल बनाउने प्रस्ताव पेश भएको छ। रानीमहलमा होटल बनाउने प्रस्ताव कहाँबाट र कसले गर्‍यो?
पाल्पाको कालीगण्डकी नदी किनारस्थित यो दरबार सरकारको स्वामित्वमा छ। कुनै पनि सांस्कृतिक सम्पदाबारे निर्णय पनि सरकारले नै गर्छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीलाई हामीले यो प्रस्तावबारे जिज्ञासा राख्यौं।
यसको जवाफमा उनले भने, 'सरकारले गर्नुपर्ने निर्णय हो। तर यसबारे हाम्रो मन्त्रालयलाई आजसम्म कुनै जानकारी छैन।'
रानीमहललाई होटल बनाउने आधिकारिक र कुनै पनि औपचारिक प्रस्ताव मन्त्रालयमा नआएको र मन्त्रालयले पनि कतै नगरेको उनको भनाइ छ।
'त्यति महत्वपूर्ण सम्पदामा होटल बनाउने जस्तो कुरा कसैले हचुवा भरमा प्रस्ताव गर्दैन। हामीले पनि गरेका छैनौं,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
रानीमहललाई होटल बनाउने निर्णय प्रक्रियाको सुरूआत गर्नुपर्ने मन्त्रालयले नै यो प्रस्तावबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्‍यो।
अनि हामीले यसबारे पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सार्वजनिक-निजी-साझेदारी मोडलमा स्थापित नेपाल पर्यटन बोर्डसँग सोध्यौं। रानीमहलमा होटल बनाउने प्रस्ताव आफूले नै गरेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. धनञ्जय रेग्मीले जानकारी दिए।
चालु वर्षको बजेट निर्माण समयमा राष्ट्रिय योजना आयोगसमक्ष रेग्मीले प्रस्तुत गरेको 'प्रिजेन्टेनसन' मै यसबारे उल्लेख गरेका छन्।
'मैले नै रानीमहललाई हेरिटेज होटल बनाएर एउटा नयाँ गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गरौं भनेर प्रस्ताव गरेको हुँ। यो कुरामा म अहिले पनि अडिग छु। तर यसपछि केही कारण छन्,' रेग्मीले भने, 'म सिइओ भएर आएपछि दुईपटक त्यहाँ पुगेँ। त्यति लामो इतिहास बोकेको दरबारको कुनै संरक्षण छैन। न कुनै व्यवस्थापन, न प्रवर्द्धन। त्यसको संरक्षण गर्न कि राज्यले संग्रहालय बनाउनुपर्‍यो, कि होटल बनाउन सकिन्छ भनेर मैले प्रस्ताव गरेको हुँ।'
रानीमहल आफैंले आम्दानी गरेर आफ्नो संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने केही वर्षमा फेरि जर्जर हुने उनको भनाइ छ। त्यस्तो अवस्थाबाट बचाउन नवविवाहित जोडीलाई आकर्षित गर्नेगरी हेरिटेज होटल बनाउन सकिने उनले बताए।
यद्यपि रानीमहलमा होटल नबनाइ संरक्षण गर्ने र वरिपरि अरू पर्यटकीय पूर्वाधार बनाएर दरबारभित्र छिर्न शुल्क लिने व्यवस्था गर्न सकिने रेग्मी बताउँछन्।
'जसरी पनि रानीमहल संरक्षण हुनुपर्छ। संरक्षण भएर मात्र भएन, त्यसले पर्यटकीय गतिविधि पनि बढाउनुपर्छ। त्यसका लागि जे उपयुक्त हुन्छ, त्यही गर्नुपर्छ,' उनले भने।
रानीमहल बि.स. १९९४ मा खड्ग शमशेर जबराले आफ्नी पत्‍नी तेजकुमारीको स्मरणमा बनाएको इतिहास छ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन १०, २०७७, ०८:२६:००